Iifoto zezilwanyana ezinokurhoxisa zikwazi ukugcina izihluthulelo zomhlaba ekhaya - zizithobekile kwaye zizintle. Iyona nto ixhaphakileyo kwaye engabizi kakhulu kwezi ngqungquthela zamaGrisi kunye namaMoor. Ezi zintlobo zezilwanyana zizalwe kwiindawo zokuthengisa ezithengiswayo, akuvumelekile ukuba zibambe iintlanzi. Masiqhelane nendlela yokunyamekela ngokufanelekileyo ukuthutha komhlaba.
Iphutha lomlambo linokudideka kunye nehlumelo lwesiGrike, isici esahlukileyo sesibini, into encinci yegobolondo le ngqobhoko phezu komsila. Zincinci ngobukhulu, malunga ne-20 okanye iisentimitha ezingama-30. Ukutya okuqhelekileyo kweebhugi zomhlaba kukusela amanzi, amajikijolo, i-lettuce, imifuno ecocekileyo, i-clover, i-dandelion,
Iifudu, kunye nazo zonke izilwanyana ezinwabuzelayo, njengotshisa kakhulu, kwaye ezinye zazo aziwunyamezeli ukukhanya kwelanga. Bakhawuleza bavutha elangeni. I-terrarium imele ibe yomoya ophuculweyo, ingabi phezulu. Ukuba akukho mhlaba ofanelekileyo, ungasebenzisa ibhokisi kunye nesibhambathiso esiphenduliweyo kunye nesiseko esomeleleyo, okanye ungasebenzisa ibhokisi eliqhelekileyo. Isibambiso siyimfuneko xa kufuneka uhambe ngesitalato, ukukhusela kwimvula enzima okanye ilanga elivuthayo. Ukuze ugweme ukumba, kuba ii-turtles zimba imivumba, inxalenye engezantsi ye-terrarium idinga ukuqiniswa.
Iintlanzi zamaGrisi kunye namaMoor eziwela ngaphaya kwamanzi ziwa ngobusika ngexesha lokubanda. Akuyimfuneko ukuphula isigqi esinjalo, kuba ngeli xesha imisebenzi ye-turtle ayinqatshelwe. Ekwindla, xa ulungiselela ubusika, i-tortle ibonisa iimpawu zokuxhalabisa.
Ukulungiselela ubusika .
I-tortle idinga uncedo, kufuneka uchithe i-enema efudumeleyo yokucoca amathumbu uze uyibeke ekudleni, ungadluli. Umgangatho wendlu yokuhlanza kufuneka uguqulwe ngamagqabi amancinci. Xa i-turtle ivala amaqabunga, yifaka i-terrarium egumbini apho izinga lokushisa alikhuphuki ngaphezu kwama-degrees ayi-8, ngokuqhelekileyo eli bushushu liphantsi kwendlu. Kanye kwiintsuku ezili-10 kufuneka uhambe ukutya kwi-terrarium.
Iqhwa alikho nje kwisitrato somzi, kodwa nakwiindawo. Kwaye kuphela kwindlela yokwenziwa kwezilwanyana ezifuywayo entwasahlobo, ezikhuselekile ngqabunga elingu-horny eliqingqiweyo, liqala ukuvuka. Amehlo abule ajikeleze, ekhupha i-scaly kunye neentambo ezinobomvu aze adibanise ubusika bawo. Kwaye ke umnini okhuselekileyo uqala ukucinga malunga nendlela yokubuyisela ukukhanya okucacileyo kwamehlo, isikhumba esikhathekayo kunye nesondlo esihle.
Kufuneka uhlambe ihote. Ukwenza oku, uthele amanzi afudumele kwisitya esincinci kwaye ubeke i-tortle apho. Kufuneka kube namanzi kuwo ukuze ihluthu ikwazi ukugcina ikhanda layo phezu kwamanzi ngokungenakunzima. Emva kokuhlamba okunjalo, sula i-turtle, iingubo ezibamba amanzi kakuhle.
Esinye isigaba "seseshoni yokuzilungisa" i-oil rubbing. Kule njongo, unokusebenzisa: umnquma, ummbila, ioli yelanga. Kwi-pharmacy ungathenga i-apricot kunye neoli yepereji. Kwisitya esahlukileyo, gxobhoza isipuni sesoyile, kwaye wongeze amahlumela amabini e-vitamin A, unokuthengwa kwi-pharmacy kwifom ye-liquid. Sebenzisa ilinen elithambileyo okanye isiqwenga sokubhinqa ukuze usule isikhumba se-tortle. Musa ukumdonsa nge-paws okanye intloko, ukuba uqala ukuwafihla kwi-shell. Kungcono oku kukubonisa ubukhali kunye noxilongo.
Hlola nge-turtle ukuba izihlunu zalo zingakhange zikhule. Zifanele zifutshane kunye neepelisi ezikhethekileyo. Kufuneka uqaphele, kwaye ungabalimazi, kungcono ukuba ungagqiba izipikili. Kwaye, ukuba oko kwenzeka, ke i-claw ephaphayo, kungcono ukufefa nge-potassium permanganate.
Iibhotho zingakhula "umlomo", kufuneka zihlanjwe. Ngamehlo enkontsi ukuphosa ihlumelo lamathambo asehlo. Ukuba iinkophe zingabambeleli ndawonye, ​​amehlo ahlambulukile kwaye acacile, ngoko awuyikungcwaba. Kwaye ngoku intsalela yeoli, kufuneka uphucule igobolondo. Le nkqubo ayifaki i-turtle impilo, kodwa umphumo wezonyango uya kubonakala kwi-shell.
Iifudu zifanele zondliwe imihla ngemihla, kwaye emva kokuba i-turtle ifinyelele kwiminyaka yobudala, iphethwe kanye emva kweentsuku ezimbini. Iifudu zifuna i-calcium, ngoko kufuneka ubeke isiqwenga sesikolo esikolweni kwi-terrarium. Ukusuka kwimifuno, iifologi zinikezwa isipinashi, iparsley, beet. Kwaye kunye namaqabunga ama-peas kunye nee-peas, ubhontshisi abancinci, isaladi, ithanga, i-zucchini, iikomkom. Yonke imifuno eqinekileyo iyanqunyulwa zibe ziincinci. Iibhontshisi kunye neerothi zifuna ukuhluthwa. Ehlotyeni nasekuseni, ukutya kwee-turtles kunokuhluka kunye nemibala yowama-non-step-mother, imibala ye-clover ebomvu. Ngovuyo badla iityuke zengqolowa ehluma. Unokunika iziqhekeza ezibilisiwe okanye inyama eluhlaza, ezo zinto zingasidli, kufuneka ususe ngokukhawuleza.
Ekugqibeleni, siya kuthetha ukuba ukunyamekela kakuhle iifudu ze-turtles, kufuneka ukhokelwe ngcebiso malunga nendlela yokunyamekela iifudu zomhlaba, kwaye i-tortle yakho iya kuphila ngaphezu kwexesha elitsha elitsha.
Ukuhluleka kwentliziyo kwizinja
Indlela yokufundisa inja ukuphendula kwisiteketiso
I-Recipe yamaqebelengwane okuzenzela
Iibhakoni izitya kunye neqanda
Ama-Anklets - iingubo zokugqoka-2016
Mousse ye Curd tsokolate
Ukukhula nokuphuhliswa kwengane kuze kube unyaka
U-Alla Pugacheva ujabulise abalandeli ngendlela ephathekayo